खेल संसार – Page 14 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०६:११ English
कोपा अमेरिकाः अर्जेन्टिना भर्सेस भेनेज्वेला, ‘हेड टु हेड’मा को बलियो ? १३ असार २०७६, शुक्रबार १७:१४
वेष्ट इन्डिजका ब्याट्सम्यान गेलद्वारा सन्यास लिने उद्घोष १२ असार २०७६, बिहीबार १२:०७
वेष्ट इन्डिज, १२ असार । वेष्ट इन्डिजका ३९ वर्षिय बिष्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले सन्यास लिने भएका छन् । उनले भारतका बिरुद्ध अगष्ट देखि सेप्टेम्बरमा हुने टेष्ट र वान डे सिरिज खेलेर सन्यास लिने भएका हुन् । उनले यसअघि विश्वकपको समाप्तिपछि सन्यास लिने इच्छा देखाएका थिए । तर बुधबार..
पल्सर अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक १० असार २०७६, मंगलवार १९:११
काठमाडौँ, १० असार । पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने अवार्डको चार वटा विधाको मनोनयन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो । वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा खेलाडी र प्रशिक्षक विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो । उत्कृष्ट पुरुष..
विश्वकपमा क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलिया भिड्दै
लर्डस, १० असार । विश्वकप क्रिकेटमा आज इंग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलिया भिड्दैछन् । खेल नेपाली समय अनुसार सवा ३ बजे लर्डस् मैदानमा सुरु हुनेछ । पाँच पटकको विश्व विजेता अष्ट्रेलियाले जारी विश्वकपमा ६ खेल खेलिसकेको छ । ५ खेलमा जित र एक खेलमा पराजित हुदै अष्ट्रेलियाले अंक तालिकामा दोश्रो..
अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको क्वार्टरफाइनलमा ९ असार २०७६, सोमबार ०९:०३
ब्राजिल, ९ असार । अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटकलको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा आमन्त्रित राष्ट्र कतारलाई २–० ले पराजित गर्दै अर्जेन्टिना समुहको उपविजेता बन्दै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । लौटारो जाभियर मार्टिनेजले चौथो मिनेटमै गोल गर्दै..
कोपा अमेरिकाः अर्जेन्टिनालाई कतारको चुनौती,‘हामी मेस्सीसँग फोटो खिच्न आएका होइनौँ’ ८ असार २०७६, आईतवार १४:२१
ब्राजिल, ८ असार । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगीताको समहु बीको अन्तिम खेलमा अर्जेन्टिना र कतार भिड्दैछन् । दुवै टोली एकअर्कालाई हराएर क्वाटरफाइनल प्रवेश गर्न चाहान्छन् । दुई खेलबाट १–१ अंक मात्र जोडेका दुवैटोलीका लागि अन्तिम खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । आगन्तुक टोली..
ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलको क्वाटरफाइनलमा
ब्राजिल, ८ असार । कोपा अमेरिका फुटबलको आयोजक देश ब्राजिल क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार बिहान भएको समूह ‘ए’ को अन्तिम खेलमा पेरुलाई ५–० गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै ब्राजिल अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो । ब्राजिलको जितमा कासीमिरो, रोबर्टो फिर्मिन्हो, एभर्टन, डानी अल्भेस र..
विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै
लर्ड्स, ८ असार । विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै छन् । लर्ड्समा नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजे हुदे खेलमा विश्वकपको सेमिफाइनल यात्रालाई झिनो आस कायमै राख्नका लागि भए पनि दुवै टिमलाई जित्नै पर्ने दबाब छ । दक्षिण अफ्रिका आफ्नो पहिलो खेलमा इंल्ग्यान्डसँग १०४..
सन्दिप र युवराज सिंहले एकै टिमबाट ग्लोबल टि २० खेल्ने, पारिश्रमिक कति ? ६ असार २०७६, शुक्रबार ०९:०५
काठमाडौँ, ६ असार । नेपाली युवा लेग स्पेनर सन्दिप लामिछाने र सोमपाल कामीले क्यानाडामा हुने ग्लोबल टि २० लिग खेल्ने भएका छन् । बिहिबार भएको ड्राफ्टमा एशोसियट देशबाट यी दुई खेलाडी छनौट भएका हुन् । सन्दिपलाई टोरोन्टो नेशनलले छनौट गरेको हो भने कामीलाई विनिपेग हकले छनौट गरेको हो । सन्दिप..
कोपा अमेरिकामा ब्राजिलको ३ गोलले मान्यता नपाउँदा नतिजा बराबरी ५ असार २०७६, बिहीबार १०:५३
ब्राजिल, ५ असार । कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक ब्राजिल भेनेजुएलाविरुद्ध गोल रहित बराबरीमा रोकिएको छ । बिहिबार बिहान सकिएको खेलमा ब्राजिलका तीन गोलले मान्यता नपाउँदा नजिता बराबरी निस्किएको हो । गोलरहित बराबरीको नतिजा जारी प्रतियोगीताको पहिलो नतिजा हो । पहिलो हाफको ३९औँ..
कोपा अमेरिकामा अर्जेन्टिना पाराग्वेसँग बराबरीमा रोकियो
ब्राजिल, ५ असार । कोपा अमेरिका फुटबलको आफ्नो दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिना पाराग्वेसँग बराबरीमा रोकिएको छ । ब्राजिलमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबार बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिना पाराग्वेसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको हो । पहिलो हाफमा पछि परेको अर्जेन्टिनाका लागि दोस्रो हाफमा..
नेपाली टिमका प्रशिक्षक हानको स्वागत ४ असार २०७६, बुधबार १३:३४
काठमाडौँ, ४ असार । नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीलाई प्रशिक्षण दिन विदेशी प्रशिक्षक नेदरल्याण्ड्सका हान अबिङ आज नेपाल आइपुगेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको आसन्न एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष सिनियर भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि प्रशिक्षण दिन हान नेपाल आएका हुन् । उनलाई त्रिभुवन..
नेपालबाट विश्वकप क्रिकेट हेर्न नपाईने
काठमाडौँ, ४ असार । इंग्ल्याण्डमा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत असार ९ गते हुने खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न नपाइने भएको छ । ९ गते बंगलादेश र अफगानिस्तानबीचको खेल हुँदैछ । विज्ञापन ऐन, २०७६ को विरोध गर्दै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले ९ गते दिउँसो १२ बजेदेखि १० गते १२ बजेसम्म..
कोपा अमेरिका फुटबलमा भेनेजुएलासँग ब्राजिल बरारबीमा
ब्राजिल, ४ असार । आयोजक ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलमा भेनेजुएलासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ । बुधबार बिहान सकिएको खेलमा ब्राजिलको गोलको प्रयासलाई भेनेजुएलाको रोक्यो । यस बराबरीसँगै समूह ‘ए’ मा दुई खेल खेलेको ब्राजिल चार अंक सहित शीर्ष स्थानमा यथावत छ । समूहको पहिलो खेलमा..
विश्वकप क्रिकेटमा आक्रामक न्युजिल्यान्डलाई कमजोर दक्षिण अफ्रिकाको चुनौती
इङ्ल्याण्ड, ४ असार । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज न्युजिल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । एजबस्टन स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार ३ः१५ बजे सुरु हुने खेलमा दुवै टोलीले जितको लक्ष्य राखेका छन् । जारी विश्वकपमा न्युजिल्यान्ड निकै आक्रामक देखिएको छ । दक्षिण..
म्यान्चेस्टर, ३ असार (एएफपी) । इङल्यान्डमा जारी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार इङल्यान्ड र अफगानिस्तानबीचको खेलमा इङल्यान्ड बलियो स्थितिमा पुगेको छ । टस जिती पहिले ब्याटिङ रोजेको इङल्यान्डले पहिलो इनिङमा ६ विकेटको क्षतिमा ३९७ रनको विशाल स्कोर बनाएको छ ।..